Dadaallo nabadeed oo lagu qaboojinayo xiisadda colaadeed ee nawaaxiga Rako oo bilawday; Wufuud isugu dhafan Issimo & madax dawladeed ee gaaray isla deegaanka. – Radio Daljir
Nofeembar 18, 2011 12:00 b 0
Rako, Nov 18 ? Waxaa socda dadaallo xooggan oo lagu baadi-goobyo xal-u-helidda xurguf-colaadeedka deegaannada miyiga ah ee degmada Rako ee gobolka Karkaar taasoo muddooyinkii ugu dambeeyey ay ka aloosnaayeen dhibaatooyin colaadeed oo dhiig badani ku daatay.
Hawlaha nabad-raadineed ee haatan waxaa ku hawlan dawladda Puntland, culimo aw-diin iyo madax-dhaqameed oo ka kala yimid inta badan gobollada Puntland si ay xal ugu helaan lurta joogsan wayday ee u dhaxaysa beelaha ood-wadaagta ah ee ku dhaqan miyiga gobolka Karkaar.
Ka sokow madaxda-dawladeed iyo duubabka-dhaqan ee halkaasi u ambabaxay waxaa iyana wararka laga helayo dhulkaasi miyiga ah ee rabshaduhu ka dhaceen ay tilmaamaya in ay halkaasi gaareen ciidamada dawladda Puntland si ay u kala dhex-galaan jifooyinka dagaallamay, loona joojiyo xabadda iyo xiisadda colaadeed intaba.
Dadaalladaan nabad-raadineed ee haatan socda ayaa yimid kaddib markii muddo dhawr todobaad ah ay halkaasi ka taagnayd xaalad colaadeed oo aad u xooggan taasoo dhalisay iska-horimaaddo dhawr ah oo sababay daadashada dhiig badan.
Dagaalkii ugu dambeeyey ee deegaankaasi ka dhacay waxaa ku dhintay dad gaarayo 18 ruux, halka dhaawucuna uu intaasi ka badnaa sida ilo-wareedo kala duwani ay noo xaqiijiyeen.
Xurgufta colaadeed ee ka dhex aloosan ood-wadaagta reer miyiga ah ayaa ka bilaabatay kala sheegasho iyo kala shaxeexaysi xagga daaqa iyo dagsiimada ah taasoo isku-baddashay rabshado hubaysan.
Sarkaal u shaqaynayey hay?adda NRC oo caawa Galkacyo lagu dilay iyo raggii dilkaasi gaystay oo baxsaday.